Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » I Italia faharoa COVID-19 Wave dia mampizara ny firenena ho faritra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
onja faharoa COVID-19 any Italia
Nisy ny didim-panjakana vaovao napetraky ny praiminisitra (DPCM) Italia Ny praiminisitra G. Conte noho ny Italia faharoa Onja COVID-19. Ny vaovao dia tonga taorian'ny misasakalina tamin'ny 5 Novambra 2020, ary ity DPCM vaovao ity dia ao amin'ny Gazety Ofisialy ny maraina.
Ny didim-pitondrana dia maminavina fa ny 5 Novambra ka hatramin'ny 3 Desambra, Italia dia hozaraina ho faritra 3: faritra mena (risika be), volomboasary (afovoany), ary faritra mavo (azo antoka), samy manana ny lalàna sy ny fandrarana tsy mitovy. Ny vaovao farany raha oharina amin'ilay volavola nivezivezy ny tolakandro dia ny taovolo sy ny mpanety no hisokatra amin'ny faritra mena.
Ao anatin'ny 24 ora manaraka dia ho fantatry ny Italiana izay sokajy isaky ny faritra hapetraka arakaraka ny index Rt (tahan'ny areti-mifindra) sy ny fepetra 21 hafa. Ireo fanasokajiana ireo dia natao hitarika resabe toy ny efa takatry ny fifandonana tamin'ny hariva teo amin'ny governemanta sy ny filoha isam-paritra izay nahatsiaro ho tsy nanana fahefana.
Fanasokajiana ireo faritra
Ny faritra mena dia misy: Lombardy, Piedmont, Calabria, South Tyrol, ary Valle d'Aosta. Tsy azo antoka ny fampidirana an'i Campania.
Ny faritra voasary dia misy: Puglia, Sisila, Liguria, ary Veneto.
Ny faritra hafa rehetra dia ao amin'ny faritra mavo.
Nangataka ny hanaovana ny fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny valanaretina miaraka amin'ireo departemantan'ny fisorohana ny faritra ny faritra. Nampanantena ny “fandraisana anjara” ao aminy ny governemanta.
Fitsipika ao amin'ny faritra mavo
Ny faritra mavo no faritra misy lalàna tsy dia hentitra loatra nefa mbola voafetra ihany noho ny didim-panjakana tamin'ny 24 Oktobra. Ny «curfew» dia manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 5 maraina, ary mandritra izany fotoana izany dia voarara ny mivoaka ny trano ankoatry ny fahasalamana na ny asa antony.
Amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia hisy ny fahalalana lavitra 100%. Amin'ny fitateram-bahoaka dia antenaina ny antsasaky ny fahaiza-manao: 50 isan-jaton'ny fiara fitateram-bahoaka, metro ary fiaran-dalamby. Mihidy ny ivon-toeram-pivarotana amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra ampahibemaso. Nakatona koa ny tranombakoka, fampirantiana ary efitrano filokana. Misy sakana amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina. Mihantona ny fifaninanana ampahibemaso, ao anatin'izany ny any an-tsekoly, afa-tsy ireo momba ny mpiasan'ny fahasalamana. Avela hiditra amin'ireo valan-javaboary, raha toa ka ampiharina ny fitsipiky ny elanelana iray metatra.
Fitsipika ao amin'ny faritra volomboasary
Ny faritra faharoa dia ny faritra volomboasary, izay hisy ny fanamafisana ny lalàna raha oharina amin'ireo faritra mavo. Ny bara, trano fisakafoanana, trano fanaovana gilasy ary fivarotana mofomamy dia hanidy ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny 6 ora hariva. Na izany aza, hisokatra hatrany ny mpanao volo sy ny foibe hatsaran-tarehy.
Izay fandrosoana any amin'ny tanàna hafa ankoatry ny toeram-ponenany na fonenany dia tokony ho raràna, raha tsy misy antony voaporofo amin'ny asa, fianarana na fahasalamana. Ho an'ny ambiny, ny lalàna rehetra amin'ny faritra mavo dia mihatra: fahafaha-manao 50 isan-jato amin'ny fitateram-bahoaka, mianatra amin'ny halaviran-dàlana amin'ny lisea, mijanona amin'ny tranombakoka ary amin'ny curfew amin'ny 10 alina.
Fandrarana ao amin'ny faritra mena
Any amin'ny faritra voatondro ho ahiana be, misy ny fivezivezena miditra sy mivoaka ny faritany, ary na dia ny fivezivezena ao anatin'ny faritany aza, dia voarara afa-tsy ny filan'ny asa voaporofo na toe-javatra ilaina na noho ny antony ara-pahasalamana.
Ny fianarana lavitra any amin'ireo faritra ireo dia hanomboka sahady amin'ny kilasy faharoa (afa-tsy ny hetsika tsy ampy taona). Ny bara, fivarotana mofomamy, trano fisakafoanana ary fivarotana rehetra izay tsy mivarotra entana ilaina dia hikatona foana. Ny fikarakarana tokantrano ihany no alefa ary - hatramin'ny 10 ora alina - mikarakara ny entina any ivelany, miaraka amin'ny fandrarana ny fihinanana an-toerana na ny manodidina.
Ny fivarotana sakafo sy zava-pisotro dia misokatra hatrany amin'ny serivisy ary koa ny faritra fandrehitra solika manerana ny làlambe, amin'ny hopitaly, amin'ny seranam-piaramanidina ary ny indostria. Tsy misy hidin-trano ho an'ny serivisy tena ilaina ary hisokatra ho an'ny besinimaro ny fivarotam-panafody sy ny fivarotana lehibe.
Ny faritra mena ihany, noho izany, no hiditra karazana hidin-trano izay amin'ny lafiny maro dia mitovy amin'ny an'ny dingana voalohany. Ary amin'ireo faritany ireo, misy ny adihevitra momba ny fampiasana ny fanamarinana tena amin'ny kinova novaina - irin'ny minisitra Speranza mafy. Mazava ho azy fa tsy maintsy hofenoina izany ary aseho rehefa tsy maintsy mivoaka aorian'ny 10 alina ianao satria izany no manomboka ny tsy fahazoana mivezivezy nasionaly.
Fanakianana ireo faritra
Ny lahatsoratra tao anatin'ny ora vitsy lasa dia eo afovoan'ny fifandonana amin'ireo faritra. "Ny fepetra izay manery sy manimba ny andraikitra sy ny asan'ny faritra sy ny faritany mizaka tena dia miteraka fikorontanan-tsaina sy ahiahy mafy", hoy ny vakitenin'ny antontan-taratasy nosoniavin'ny filohan'ny fivorian'ny faritra, Stefano Bonaccini.
“Ny faritra,” hoy hatrany ny antontan-taratasy, dia mangataka ny handefasana ny vatsy famelomana aina miaraka amin'ny Biraon'ny Praiminisitra ”ary“ hanamafy ny fangatahana fepetra nasionaly tsy mazava ary, ankoatr'izay, ny fepetra fameperana bebe kokoa amin'ny [faritra] eo amin'ny faritra sy eo an-toerana… iza no afaka ary tsy maintsy manafatra ny fanidiana ny fanakatonana ny besinimaro amin'ny arabe sy ny kianja amin'ny ivon-tanàna. " Avy amin'i Palazzo Chigi, nampahafantarin'izy ireo fa ny praiminisitra dia efa miara-miasa amin'ny Minisitra Roberto Gualtieri sy Stefano Patuanelli momba ny didim-pitsarana ho fankatoavana hankatoavina amin'ity herinandro ity.